Occupy Yangon / Mandalay? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » Occupy Yangon / Mandalay?
Occupy Yangon / Mandalay?
Posted by kai on Oct 12, 2011 in Ideas & Plans |3comments
တိတိကျကျဆိုရင်..စက်တင်ဘာ (၁၇)ကစလို့..အမေရိကပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက် Zuccotti Park မှာ.. လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်..။
အမေရိကလူဦးရေအားလုံးရဲ့ .. ၁ရာခိုင်နှုန်းက.. မီလီယံနာ.. ဘီလီယံနာတွေဖြစ်နေပြီး.. ကျန်တဲ့ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းကို ချယ်လှယ်အမြတ်ထုတ်နေလို့.. လုပ်တာပါတဲ့..။
အဲဒါကြောင့်.. ဒီလှုပ်ရှားမှုကို.. 99% MOVEMENT လို့လည်းခေါ်ကြတယ်.။
အဲဒီလိုနဲ့.. ဒီနေ့မှာ တကမ္ဘာလုံးပြန့်သွားတာ.. အသေးစိတ်တော့ အောက်က အရောင်ခြယ်မြေပုံမှာကြည့်ပါ..။
… မြန်မာ့လူတန်းစားမှာလည်း.. ဆင်းရဲချမ်းသာကွာလွန်းတာမို့.. လှုပ်ရှားမှုထဲ.. ရန်ကုန်ပါသွားအောင် ဂရပ်ဖစ်နည်းနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.။ :D
Occupy Yangon/Mandalay/Thandwe စသဖြင့် လုပ်ကြည့်မကောင်းဘူးလား..။
မြန်မာကို.. ကမ္ဘာက.. ပိုသတိထားမိတာပေါ့..။
ငွေတွေမတရားရှိနေတဲ့.. သူဌေးတွေကို.. မျှမျှတတ လုပ်ခိုင်းတာပါပဲ..။
.. တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ေ၇း…နိုင်ငံရေးစံနစ်တွေပြောင်းပြီး. အဲဒီကနေအကျိုးအမြတ်တွေရ.. အရမ်းချမ်းသာနေတဲ့သူတွေ… အနစ်နာခံနေသူ/ခံခဲ့သူတွေကို.. လူထုကို… တချက်လောက်ပြန်ငဲ့ကြည့်ပေးဖို့မလိုဘူးလား…။
ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့.. အဓိက ဂိုက်လိုင်းက.. အောက်မှာနားလည်သလို ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်..။
၂) အသားရောင်၊ လိင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ဘက်လိုက်မှုမထား
၃) ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသော လူဦးရေကိုယ်စားပြု
၄) Arab Spring နည်းဗျူဟာ အတိုင်းလုပ်
၅) nonviolence အကြမ်းမဖက်ရ…………. တဲ့.။
အောက်မှာ..We Are The 99% ရဲ့ အင်တာနက်ကလုပ်ပုံတချို့လည်း တင်ပေးလိုက်တယ်..။
ကိုယ်လိုချင်တာ..စက္ကူတရွက်မှာ ချရေးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်.. ၀က်ဘ်ဆိုက်..ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တင်ယုံပါပဲ..။
ဥပမာ.. လမ်းပြင်ပေးပါ၊ ကျောင်းစရိတ်လျှော့ပေးပါ. မီးမှန်အောင်လုပ်ပေးပါ.. စသဖြင့်ပေါ့..။
အခုမြန်မာပြည်ထဲက..အသစ်ဖွဲ့ထားတဲ့.. လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ပို့မဲ့.. တိုင်စာတွေကို.. ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း..လွှတ်တင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ..။
Red- Arab Spring Impact, No Occupy Wall Street Green- Arab Spring Impact protests with Occupy Wall Street Impact Blue-Occupy Wall Street Impact
The participants of the event are mainly protesting against social and economic inequality, corporate greed, and the influence of corporate money and lobbyists on government, among other concerns. The goals and demands vary by participating individuals or groups, but many news organizations have compared it toaleft-leaning version of the Tea Party protests. By October 9, similar demonstrations had been held or were ongoing in over 70 cities (List in sidebar).
ရွာထဲမှာလဲ တစ်ရာခိုင်နှုန်းသော မင်ဘာတွေနဲ့ ကျန်ကိုးဆဲ့ကိုးရာခိုင်နှုန်းသော မင်ဘာတွေရဲ့ ပွိုင့်တွေကို အချိုးကြကြည့်ပါလား။ ရွာမှာ သူပုန်ထတာ မြင်ချင်လို့ပါ..။
ကျုပ်အမြင်တော. တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ်တက် စနစ် ဗမာပြည်မှာသိပ်အားနည်းတယ်။ ခေါင်းဆောင်မျှော်ရောဂါနဲ.ကျုပ်တို့လဲ ကျွန်သက်ရှည်နေကြတာ အခုချိန်ထိပဲ။ Arab Spring နည်းဗျူဟာလိုမျိုး အားလုံးစုစုစည်းစည်း စနစ်တကျလုပ်နိုင်ဖို. ကြိုးစားသင့်တယ်။